Isiqondisi Sabathengi - Indawo Yemakethe B2B - Imininingwane Yabathengi - Alietc.com
Lapha e-Alietc sizibophezele ekwakheni imakethe yedijithali yomhlaba wonke ehlanganisa ndawonye abakhiqizi, abahlinzeki futhi abathengi, esiza ekusunguleni ubudlelwano bebhizinisi obuzuzisana nobokuhlala isikhathi eside.
Isihluthulelo sempumelelo njengomthengi singaphumula ezintweni eziningana, ukuze wandise amathuba akho empumelelo ku-Alietc, sihlanganise le Ncwadi Yomhlahlandlela ewusizo ukukusiza ugweme amaphutha amaningi ajwayelekile enziwa lapho uzama ukuthenga imikhiqizo.
Isihluthulelo sokwenza idumela elihle nabakhiqizi nabahlinzeki ukukhokha ngokushesha
Lapho usebenzisa okuningi I-Alietc, kulapho uzobona khona ukuthi idumela lakho liyobalwa kakhulu futhi lizokusiza ukuvala amadili kalula. Enye yezinto ezibucayi kakhulu maqondana nedumela lakho njengomthengi ukuthi uyihlawula kanjani ngokushesha i-akhawunti yakho nomhlinzeki noma umenzi. Kungenzeka ukuthi uvumile ukukhokha u-50% ngaphambili kanye no-50% ekulethweni. Kungenzeka ukuthi uvumelane nomhlinzeki noma umenzi ukuthi ukhokhe ama-akhawunti ezinsukwini ezingama-30 zokutholwa kwempahla.
Noma ngabe yimiphi imigomo ovuma ukuyikhokha, namathela kuyo futhi, uma ufuna ukwakha ubudlelwano obuhle besikhathi eside abahlinzeki futhi abakhiqizi, bakhokhe ngokushesha kunalokho abebekulindele.
Ingqikithi eyodwa oyoyithola lapho usebenzisa iplatifomu ye-Alietc ukuthi sibeka ukugcizelelwa okukhulu ekuthembekeni. Ukwethembana, kwebhizinisi, kucishe kube yinto yezentengiso ngokwayo, futhi nedumela elimisiwe njengomthengi othembekile, amandla akho okuthenga azokwenyuka kakhulu. Njengesibonelo, umenzi kungenzeka ukuthi umema okunikezwayo ngomkhiqizo abawuthengisayo nokuthi umkhiqizo uwuthakasele. Cabanga uma umakhi enokunikezwa okukathathu, okubili kusuka kubathengi abangenedumela, nokunikezwa kwakho, okuphansi kakhulu, kepha bayazi ukuthi uma bebhekana nawe, bazokhokhelwa ngaphandle kwezinkinga, amathuba ukuthi ngenkathi akho kungathiwa umnikelo ophansi kakhulu, yiwo owamukelwa ngoba ubonwa njengomthengi othembekile.
Ukukhulumisana okuhle kubalulekile
Kusukela ekuqaleni kwanoma yikuphi ukuthengiselana, ukuxhumana okuhle nokucacile kubalulekile njalo. Ungesabi ukubuza umphakeli noma umenzi wemibuzo ngemikhiqizo abayithengisayo, okubandakanya amashejuli wokulethwa, njll. Sekephuze kakhulu ukukhononda ngokuthile uma i-oda selifikile.
Vele, ukuxhumana akufanele kuphele uma i-oda lakho seliphothuliwe nezimpahla sezifikile futhi ziyanelisa. Yazisa umphakeli noma umenzi ukuthi wazi ukuthi ujabule ngokuphelele ngakho konke futhi unethemba lokuthi uzophinde wenze ibhizinisi kungekudala. Ingxenye yempumelelo ye- I-Alietc kusekelwe enanini lobudlelwano obuhle, obuhlala isikhathi eside obenziwe phakathi kwabathengi, abahlinzeki nabakhiqizi.
Lapha e-Alietc sikuqonda ngokuphelele ukuthi njengoba singumhlaba jikelele esigcawini, akubona bonke abantu abazokhuluma ulimi olufanayo. Ngoba ukuxhumana okuhle kubaluleke kakhulu, siluthobele uhlu lwabahumushi abazokwazi ukukusiza ekuxhumaneni kwakho.
Ukuxhumana nabaphakeli nabakhiqizi
Ngoba abathengi akudingeki babe ngamalungu ukuze bathenge imikhiqizo ku-Alietc, sinqume ukuthi indlela ephephe kunazo zonke yokuqala izingxoxo ukuza kuqala ngathi. Noma ngabe umkhiqizo uthengiswa ngentengo engaguquki noma umphakeli / umkhiqizi akumema okunikezwayo, iphoyinti lakho lokuqala oxhumana naye kufanele libe yilo I-Alietc.
Lokhu kwenzelwa ukuthi sikwazi ukugwema 'abagaxekile' futhi sikhiphe imibuzo engeyona eyeqiniso. Uma senelisekile ukuthi uphenyo lwakho luyiqiniso, sizokunikeza imininingwane yokuxhumana nomthengisi noma yomkhiqizi futhi ungahle ubhekane nabo ngqo, akudingeki ukuthi ufake I-Alietc okunye.
Ungasebenzisa injini yethu yokusesha enamandla ukuthola abakhiqizi noma abaphakeli bomkhiqizo (ow) owufunayo futhi uthintane nabaphakeli mahhala.
Ungafaka ibhidi kunoma iyiphi imikhiqizo efakwe kuhlu lokuthengiswa ku- I-Alietc ipulatifomu. Ngalesi sixazululo udinga ukubhalisela noma yiluphi uhlelo.
Ekugcineni, ungabeka isicelo somkhiqizo, lapho ukwenze kucace ukuthi yimiphi imikhiqizo ()) ofuna ukuyithenga nokuthi yini okulungele ukuyikhokhela (yona) - noma yimuphi umhlinzeki / umenzi onganikeza umkhiqizo (imikhiqizo) oyifunayo uzothola isaziso esisheshayo sesicelo sakho somkhiqizo abese ezothintana uma intengo ofuna ukuyikhokha inenzalo kubo.
Uma ufuna ukuthenga imikhiqizo, uzobe usufike endaweni efanele. I-Alietc “Umgede ka-Aladdin” wangempela cishe wawo wonke umkhiqizo ongawucabanga noma impahla eluhlaza ongayicabanga, futhi eminingi okungenzeka ukuthi awuzange ube nayo.
Njengemakethe yedijithali ye-B2B, i-Alietc yakhelwe ngenhloso yokwazisa abathengi kubahlinzeki kanye nabakhiqizi bemikhiqizo ngentengo ekhangayo ngenkathi iqinisekisa amazinga aphezulu ekhwalithi. Ozobuye uthole ukuthi, ngokuya ngalokho ofuna ukukuthenga, ungathola abathengisi abaningana, noma ngabe ngabakhiqizi noma abathengisi, okusho ukuthi bazokwazi ukukunikeza imikhiqizo ngentengo ukuze ikulungele ukuze uqale okuzoba yithemba elihle nobuhlobo obuhlala njalo.
Ngokusebenzisa okubanzi kwezindlela ezihlosiwe ze-SEO, sidale imakethe yedijithali ye-B2B engafani nemikhiqizo ethengiswa ngamanani athize njengoba ungathola kumapulatifomu anjenge-eBay noma i-AliBaba, kodwa futhi ikhuthaza ukuxoxisana okuqondile phakathi kwabathengi nabathengisi, bobabili abangamalungu epulatifomu ye-Alietc, okusho ukuthi bobabili bakukhuthalele ukwenza ibhizinisi.
Okubalulekile ukuthi uqonde ukuthi uyakwazi ukulawula ngokuphelele ukuthi uthenge imikhiqizo nokuthi uyithumela kubani, njengoba kuzovezwa ngezansi.
Okokugcina, ungadinga ukubhalisela omunye wethu amapulani wobulungu, uma ufuna ukubeka ibhidi noma ukufaka isicelo sokuthenga umkhiqizo.
Lapho usubhalisele i-Alietc, ukhululekile ukuqala usesho lwakho nomthombo wemikhiqizo ongayithenga.
Lokhu kungenziwa enye yezindlela ezintathu:
Sesha nabahlinzeki boxhumana nabo. Ungasebenzisa injini yethu yokusesha enamandla ukuthola abakhiqizi noma abaphakeli bomkhiqizo (ow) owufunayo futhi uthintane nabaphakeli mahhala.
Amabhidi endawo. Ungafaka ibhidi kunoma yimiphi imikhiqizo ebhalwe ukuthi ithengiswe endaweni yesikhulumi se-Alietc. Kulesi sixazululo udinga ukubhalisela kunoma yiluphi uhlelo.
Isicelo Sokuthenga Komkhiqizo. Ungasifaka isicelo somkhiqizo, lapho usenza kucace ukuthi yimiphi imikhiqizo () oyifunayo ukuyithenga nokuthi yini okulungele ukuyikhokhela (yona) - noma yimuphi umhlinzeki / umenzi onganikela ngemikhiqizo oyikho oyifunayo uzothola isaziso esisheshayo sesicelo sakho somkhiqizo abese ezothintana uma intengo ofuna ukuyikhokha inenzalo yazo. Kulesi sixazululo udinga ukubhalisela kunoma yiluphi uhlelo.
I-Alietc - Ingaphezulu Kakhulu Kwezindawo Zemakethe ze-B2B